Akụkọ - Achọ maka akụkụ ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ na-aga n'ihu na-eto
Ochicho maka otutu ihe otutu na-aga n’ihu
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ ntiwapụ nke ụlọ na-adịkarị njikere, mana ọnọdụ ntiwapụ nke mba ofesi na-agbasawanye, nke na-enwe mmetụta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụwa, ọnụọgụ uru na usoro ntinye. Site na mgbasa nke ọrịa a na ụwa, dị ka ihe ndị dị mkpa maka igbochi ọrịa, dị ka ihe nkpuchi na uwe nchebe, ọchịchọ maka akụrụngwa ọgwụ na akụrụngwa dị ka akụrụngwa na-atụle okpomọkụ na-amụba ngwa ngwa, wee bụrụ ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu n'oge oge ọrịa ahụ. Dika data gara aga nke Ministry of Industry and Information Technology, n'ime ọnwa abụọ gara aga, mmepụta nke temometa infrared karịrị nke afọ niile nke afọ gara aga. Site na mmụba nke iwu site na mmiri, onyinye nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na ụkọ na-aga n'ihu.
N'ịbụ nke ọnọdụ ọrịa ahụ metụtara, ọtụtụ ndị na-emepụta 'esenidụt iwu maka akụrụngwa mgbochi ọrịa ejirila ọkụ n'oge na-adịbeghị anya. Ndị na-emepụta ihe na ngalaba okpomọkụ na ngwaọrụ ahụike kwuru na ha anatala iwu ndị ọzọ na mba ofesi n'oge na-adịbeghị anya, gụnyere akụrụngwa nyocha igwe, ihe nzacha na nyocha, nke si na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na Europe. N'ihi mmụba na mberede nke mkpa esenidụt, ngwaọrụ ahụike metụtara nchọpụta COVID-19 na ọgwụgwọ na-aga n'ihu na-ewu ewu, gụnyere egbe ọkụ ihu ihu, infrared temometa, akụrụngwa onyonyo CT na akụrụngwa ọgwụ ndị ọzọ dị ụkọ. Ọchịchọ siri ike n'ahịa ọgwụ na-eme ka agụụ ihe elektrọnik dị elu na-abawanye.
Dika temometa ihe di oku nke ugbua di oku, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo gunyere: ihe omimi infrared, MCU, ebe nchekwa, ngwa LDO, onye na-echebe ike, diode. Infrared okpomọkụ ihe mmetụta bụ isi akụrụngwa maka okpomọkụ mmesho ngwaọrụ. N'etiti ha, ọkọnọ na ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nchekwa, MCU, mgbaàmà mgbaàmà na ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ siri ike. Ihe data na-egosi na ọchịchọ nke ihe mmetụta infrared thermopile doro anya, na-aza 28%, na-esote processor na mgbawa ike, na-aza 19% na 15% n'otu n'otu, yana PCB na mgbawa mgbawa maka 12%. Ihe mejuputara uzo 8.7%.
Ka ọrịa a na-agbasa n'ụwa niile, ọtụtụ mba nọ n'ọnọdụ mberede. Site na ọchịchọ na-arịwanye elu maka akụrụngwa mgbochi ọrịa n'ụlọ na mba ofesi, dị ka onye na-emepụta thermopile IR sensọ na modulu, ọrụ dị mkpa dị mkpa na ntinye nke akụrụngwa igwe, Sunshine Teknụzụ zaghachiri ngwa ngwa a. Mgbe anyị na-ekwenye n'ụzọ zuru ezu ọchịchọ nke ndị ahịa, anyị wusikwara nyocha na mmepe ohuru ike, iji nye ihe ndabere pụrụ ịdabere na ya maka akụrụngwa na-enweghị ịkpọtụrụ okpomọkụ maka mgbochi na njikwa ọrịa.